Imibuzo Ebuzwa Rhoqo ye-Oxford Global... | Oxford isiXhosa Living Dictionaries
Ikhaya Imibuzo Ebuzwa Rhoqo ye-Oxford Global Languages
Imibuzo Ebuzwa Rhoqo ye-Oxford Global Languages
Ziziphi iinjongo ze-Oxford Global Languages (OGL)?
Eyona njongo iphambili yale nkqubo kukubeka isiqulatho seelwimi ezi-100 kwi-intanethi ize yenze eso siqulatho sifumaneke kubasebenzisi nabaphuhlisi abasehlabathini lonke. Ukuze bakwenze oku, iqela kufuneka liyile isiqulatho solwimi nesichazi-magama esinokugcinwa, sidityaniswe, size sifikelelwe ngeendlela eziliqela. Iphulo le- OGL liza kubangela kubekho uphuhliso lwezixhobo namancedo amatsha adijithali ukuxhasa iilwimi ezingaxhaphakanga dijithali kunye neelwimi ezaziwayo ehlabathini. Iza kwenza ezi lwimi ziphile, zikhule, zibangele umdla kubantu bedijithali, zize zibancede banikele inkcazelo ngazo, kuquka ukwahluka nokuyelelana kwazo.
Uzikhetha njani iilwimi ezinokusungulwa?
I-OGL inenjongo yokuba neelwimi okungenani ezi-100 zizonke ibe siyazi ukuba oku kungathatha iminyaka emininzi ukukuphumeza. Siqale nje ngeelwimi ezilishumi kuphela ezahluke kakhulu ngokusuka kudederhu lweengingqi, ngalunye lunamazinga ahlukahlukeneyo okubakho dijithali, ukuze zibonise imigaqo ye- OGL zize zicelumngeni uqikelelo lwethu njengoko sihamba. Njengoko le nkqubo iphuhla, siza kuyandisa ukuze sigubungele udederhu olubanzi lweelwimi ezingaxhaphakanga dijithali nezehlabathi.
Zeziphi iilwimi eziqukiweyo kule nkqubo? Yaye ndingafumanisa njani ukuba zeziphi iilwimi eziza kulandela?
Ungakhangela iilwimi esisele sizisungulile uze ufumanise ukuba zeziphi iilwimi ezongeziweyo kule nkqubo apha. ungakhetha, nokusayinela iphephandaba lethu lakwa-Oxford Global Languages ngokusiqhagamshela apha.
Ngaba usebenza neentlangano zasekuhlaleni kunye namalungu karhulumente kule nkqubo?
Ewe, kodwa asikho phantsi okanye asiyonxalenye yalo naliphi iziko elikhoyo. I- OGL liphulo elitsha nelizimeleyo elixhaswa yi-Oxford University Press (OUP) njengenxalenye yothumo lweYunivesithi yese-Oxford lokusasaza imfundo noncedo lwemfundo ehlabathini. Noko ke, siyakuvuyela ukusebenza nayo nayiphi intlangano efuna ukwabelana okanye enomdla kwiinjongo ze- OGL, njengoko le nkqubo iqhubeka iphuhla, siza kudinga izinxulumane zamalungu karhulumente, ootishala, iiyunivesithi, imibutho yokunceda, neenkampani. Sele sizakhele unxulumano olukhulu nezinxulumane, ootishala, neegcali zolwimi kwihlabathi lonke. Ukuba unomdla wokuba yinxalenye yale nkqubo, nceda usiqhagamshele apha.
Sivela phi isiqulatho sesayithi nganye yeelwimi?
Isiqulatho sethu sisekelwe kulwimi lokwenene, kusetyenziso lokwenene, nakubasebenzisi bokwenene. Kwezinye iilwimi ezikwinkqubo ye-OGL , izichazi-magama ezisexesha azikho kwakubakho. Ngoko ngoxa kwezinye iimeko sisebenzisa isichazi-magama esikhoyo njengesiqalo sethu, kwezinye iimeko kufuneka sidibanise isiseko sentsingiselo ngokusebenzisa amagama olwimi – ingqokelela yemibhalo – esithi kuyo ngokuzenzekelayo sithathe zonke iindidi zenkcazelo yolwimi. Oku kunika iintyilalwazi isiseko sokuyila isiqulatho esitsha. Sikwakumema ukuba wena, abasebenzisi, nizibandakanye, umzekelo ngokunikela ngeenguqulelo nezinye iinkcazelo ezinxulumene nolwimi lwakho. Esi siqulatho esenzelwe umsebenzisi siye senze abahleli bandise inkcazelo ekhoyo kulwimi ngalunye.
Ngaba isiqulatho esenzelwe umsebenzisi siyalugqwetha ulwimi ‘lwemveli’?
Imiba yolwimi yenza abantu bathethe kuba baziva benebhongo ngolwimi abaluthethayo. Abanye abantu bavakalelwa kukuba ‘ziigcali’ kuphela ezazi izinto eziphathelele ulwimi yaye ukusebenzisa isitsotsi okanye intetho eqhelekileyo ‘akulunganga’ ibe akunandawo kwisichazi-magama. Sikholelwa ukuba zonke iintlobo zolwimi, ezemveli okanye eziqhelekileyo, zibalulekile, yaye izithethi zomthonyama sele zisazi gqitha ngolwimi lwazo. Injongo yethu ngenkqubo ye-OGL kukuqokelela eyona nkcazelo ininzi ngokusetyenziswa kolwimi – ngabasebenzisi balo – ukuze oko sikwenzayo kufanele wonke umntu.
Ezinye iilwimi zigubungela okungakumbi kunezinye. Kutheni kunjalo?
Omnye wemigaqo yale nkqubo kukuqala kancinci, size sakhe. Ngoko nokuba sinesiqulatho esimbalwa esikhoyo solwimi, singakwazi ukusiquka kwinkqubo ukuze sivumele abasebenzisi baqalise ukusebenzisa isiqulatho baze basinike uluvo lwabo. Njengoko le nkqubo iphuhla, isiqulatho siyakhula naso.
Ndingasongeza njani isichazi-magama sam okanye ulwimi lwam kwinkqubo ye-OGL?
Ewe asinakuquka yonke into kodwa kukho iilwimi ezithile ezingenasiqulatho esisele sikho. Ukuba wena, iyunivesithi yakho, okanye intlangano ninento enicinga ukuba ingabangela umdla kule nkqubo, okanye ninamacebiso malunga nendlela emayithathwe yi-OGL , nceda usiqhagamshele.
Yintoni indima ye-OUP ekuphuhliseni iilwimi kwihlabathi lonke?
I-OUP lisebe leYunivesithi yase-Oxford yaye, ngenxa yoko, ngokufanayo neYunivesithi uthumo lwayo kukwandisa ulwazi nemfundo kwihlabathi lonke. Iyintlangano yokupapasha yehlabathi enamancedo akhethekileyo, ubuchule, nolwazi yaye inembali ende yokubonelela ngezinga eliphezulu lezinto zemfundo, ezisetyenziswa lihlabathi. Sisebenza neengcali zolwimi lwasekuhlaleni, eziyinxalenye yolwimi lwabo lwasekuhlaleni, ukuze ziyile isiqulatho esenzelwe olo lwimi lwabo. Le yinxalenye yothumo lwethu: ukwabelana ngamancedo ethu ukuze kungenelwe abantu abangakumbi.
Babandakanyeke kangakanani abantu bolwimi lwasekuhlaleni?
Ubandakanyo lwabantu lubalulekile. Sifuna abantu bolwimi lwasekuhlaleni babandakanyeke kule nkqubo, enoba oku kukwisiqulatho sokucebisa okanye kukufikelela uncedo lwethu. Njengoko le nkqubo iphuhla kuza kubakho amaphulo amatsha avumela abantu bolwimi bakhe baze basebenzise isiqulatho solwimi lwabo.
Yintoni eyenza i-OGL yahluke?
Iinkqubo ezininzi zibonelela ngeesayithi zasimahla zolwimi okanye injongo yazo kukuqokelela amancedo olwimi, kodwa zimbalwa iinkqubo ezikhoyo eziyila amancedo abanzi nantsonkothileyo olwimi ngeelwimi ezininzi, ngemigaqo yolwimi oluyintsika ye-OGL. Isiqulatho sisekelwe kusetyenziso oluqhelekileyo yaye sigcinwa sisexesheni size sihlale ixesha elide, sigcina iilwimi ziphila ibe zibangela umdla. Isizathu sikuthumo lwethu – sakha ikamva lexesha elide leelwimi zehlabathi, olingenanzuzo ikhawulezayo.
Ngaba isiqulatho se-OGL sesasimahla?
Zonke iiwebhusayithi ze-OGL zisetyenziswa simahla. Ungakhangela amagama, iinguqulelo, nenye inkcazelo yolwimi. Isayithi zisoloko zisiza ngolwimi oliyintloko yaye maxa wambi nangesiNgesi ukuzenza zisebenziseke nangakumbi.
Naxa sisungula kwiwebhusayithi ye-OGL , siyaziquka nazo kwinkqubo ye- Oxford Dictionaries API. Ukuba ungumphuhlisi onomdla ekusebenziseni inkcazelo yolwimi kwi-aphu yakho, ungangena kwisiqulatho sasimahla se-OGL sosetyenziso lwabucala nolunosetyenziso olulionganiselweyo, ungarhumela iplani zethu zenyanga ukuba unqwenela ukuqhubeka usebenzisa ii-API ngokungakumbi. Nceda utyelele iphepha lethu le-API okanye siqhagamshele apha ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi.
Ndingayaphi xa ndifuna ukuzibandakanya neprojekthi ye-OGL?
Singathanda ukuva kuwe, ngoko siqhagamshele ukuba:
ufuna ukwazi ngakumbi ngale nkqubo
uvakalelwa kukuba wena okanye intlangano yakho ingathanda ukusebenzisana nabakwa-Oxford Dictionaries ekusincedeni sifikelele iinjongo ze-OGL’
ungathanda ukusiqhagamshela ngokusayinela iphephandaba lethu le- OGL
inkawu ityiwa ilila